ပတ် လည်ကြုံးစ နစ် – Hlataw.com
ပတ် လည်ကြုံးစ နစ်
အိမ် တံခါးခေါင်းလောင်းကို ကောင်မလေးတစ်ယောက် ဖြည်းညင်းစွာ နှိပ်လိုက်ပါသည်။ တံခါးဖွင့်သံနဲ့ အတူ ”ဟယ် မိုး ပါလား.. ရောက်လာပြီလား.. လာ လာ ဝင်ခဲ့လေ” “ဟုတ်ကဲ့ မမမြင့်.. ဘူတာရုံကနေ တန်းလာခဲ့တာ ကိုမောင်ကော” ”ရှိတယ် ရှိတယ် ဇာနည်လည်း ရှိတယ်” ”ကိုမောင်ရေ ဇာနည်ရေ ဒီမှာ မိုး ရောက်လာပြီ” အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းသို့ ကိုမောင်နှင့် ဇာနည် ရောက်လာပါသည်။ အလန်းလေးပါလား။ ဇာနည်တစ်ယောက် စိတ်ထဲက စဉ်းစားလိုက်ပါသည်။
ဟုတ်ပါသည်။ မိုးက မိန်းမချောလေးတစ်ယောက်ပါ။ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နှင့် အရပ်ရှည် ပိန်သွယ်သူလေးပါ။ တင်တွေ ရင်တွေကလည်း မကြီးလွန်း၊ မသေးလွန်း။ အနေတော်။ ကြည့်ကောင်းတဲ့ ဆိုဒ်ကလေးပါ။ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် တက်မယ့် ကျောင်းသူလေးမို့ တက်ကြွလန်းဆန်းတဲ့ ပန်းကလေးနှယ်။ ဇာနည်ကလည်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား။ တတိယနှစ်။ အသက်အရွယ်ချင်းကလည်း သိပ်မကွာပါ။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်တော့ ကွာခြားသည်။
ဇာနည်က ဂျင်မ် မှန်မှန်သွားပြီး အားကစားလိုက်စားသူမို့ ဘော်ဒီတောင့်သည်။ ကိုမောင်နဲ့ မမမြင့်တို့ စုံတွဲကတော့ တစ်မျိုး။ ကိုမောင်က ပိန်ပိန်ပါးပါး။ မမမြင့်က ရင်ရင်လှ တင်တင်လှ။ ဆက်ဆီကျပြီး ပူပူလောင်လောင်လှသူ။ စမ်းချောင်းထဲက ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ မိဘဘက်မှ အမွေရသော အိမ်လေးတစ်လုံးမှာ နေကြသည်။ အိမ်မှာ အခန်းပိုတွေရှိနေလို့ ဇာနည်နှင့် မိုး ကို ငှါးထားခြင်းပါ။ ညားခါစ လင်မယားမို့ ချစ်ဖျားတွေတက်နေကြသည်။
စိတ်လာရင် တွေ့မရှောင် လိုးတတ်ကြပါတယ်။ “မိုးနဲ့ ဇာနည်ကို မိတ်ဆက်ပေးရဦးမယ်.. အိမ်မှာ တူတူနေကြမယ့် လူတွေဆိုတော့ ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပေါ့” “ဟာ မမမြင့်ကြီးကလည်း နောက်နေပြန်ပြီ” “မိုးရော ဇာနည်ပါ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့.. မိုးကလည်း ဇာနည်ကို မဆိုးဘူး စိတ်ကူးယဉ်စရာပေါ့” “ကဲ မိုး လည်း နားလိုက်ပါဦး… နောက်မှ စကားပြောကြတာပေါ့” ဒီလိုနဲ့ တစ်ပတ်လောက်နေတော့ ကျောင်းတွေ ဖွင့်ပြီမို့ မိုးနှင့် ဇာနည်တို့ အလုပ်ရှုပ်ကြပြီ။ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် ခဏ ဆုံကြသည်။ မမမြင့်တို့ကတော့ ပုံမှန် ကြားရက်များကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြတ်သန်းကြသည်။
“ကိုဇာနည် မနက်ဆိုရင် ထပြေးတာလား.. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာလား” “ဟုတ်တယ် မိုးရဲ့.. ဘာဖြစ်လို့လဲ” “မိုးလည်း လိုက်ပြေးချင်လို့” “ရပါတယ် မနက်ဖြန် ပြေးကြတာပေါ့” စနေနေ့ မနက် အားကစားဝတ်စုံ ကွက်တိ အသားကပ်လေးနဲ့ မိုး က လှချင်တိုင်း လှနေပါတော့တယ်။ ဇာနည်လည်း ဘောင်းဘီ ပွပွဝတ်ထားလို့ တော်သေးသည်။ ချက်ချင်း လီးတောင်လာလို့။ ပြေးကြတော့လည်း ဇာနည်က မကြာမကြာ နောက်ချန်နေခဲ့သည်။ မိုး ရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှကို တစ်ဝကြီး ရှူစားပစ်လိုက်သည်။
အိမ်ရောက်မှ တွေ့ကြတာပေါ့။ ဇာနည်က အကြံသမား။ မိုးနဲ့ ဇာနည် အတူတူ ရှယ်သုံးရသည့် ရေချိုးခန်းနံရံမှာ အပေါက်ဖောက်ထားသည်။ အလည်က ရေချိုးခန်းကို ဟိုဘက်ခန်း ဒီဘက်ခန်းနေကြတော့ ဇာနည်ဘက်က နံရံကို အပေါက်ဖောက်လိုက်ရင် မြင်ကွင်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း။ မိုး ရေချိုးခန်းဝင်တဲ့ အချိန် ချောင်းကြည့်နေကျ။ မိုး ရေချိုးတဲ့ ကိုယ်လုံးတီးလေးကော၊ တစ်ကိုယ်ရေ အာသာဖြေတတ်တာကော။ ဇာနည်တို့ အလွတ်ရနေပြီ။ ချောင်းကြည့်ရင်း ကွင်းပေါင်းလည်း မနည်းအောင် တိုက်ပြီးပြီ။ မိုး ရဲ့ နို့တွေက လုံးဝန်းမို့မောက်နေသည်။
ကိုယ်လုံးပိန်သွယ်သော်လည်း ဘော်ဒီနဲ့ စာရင် နို့ကြီးတယ်။ စောက်ဖုတ်ကလည်း ဖောင်းဖောင်းကြီးနဲ့ ခန့်ထည်သည်။ စောက်မွေးအမြဲရိတ်သူမို့ ပြောင်ရှင်းတဲ့ ကတုံးလေးပါ။ ရေချိုးပြီးရင် စောက်ဖုတ်ကိုလည်း နှိုက်ကစားတတ်သည်။ စောက်စိကို ပွတ်ရင်း အာသာဖြေတတ်သည်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ လုပ်စရာရှိတာလုပ်ကြသည်။ မိုး ရေချိုး၍ ဇာနည်ချောင်းကြည့်သည်။ ကွင်းတိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဇာနည်လည်း ရေချိုးပြီး အပြင်ထွက်သွားသည်။
မိုး ကတော့ မမမြင့်နှင့် ကိုမောင်တို့နဲ့ နေ့လည်စာ ထမင်းစားဖြစ်သည်။ “မနက်က ထပြေးတာ ပင်ပန်းသွားပြီ.. မမမြင့်ရေ မိုး တစ်ရေးလောက် အိပ်လိုက်ဦးမယ်” “အေး အေး မမမြင့်လည်း မီးပူတိုက်လိုက်ဦးမယ်” ကိုမောင်ကတော့ မမမြင့် မီးပူတိုက်နေသော အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ ဂျာနယ် ဖတ်နေသည်။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ ရေငတ်လာသည်။ ကိုမောင် နောက်ဖေးဝင်၍ ရေဝင်သောက်တော့ မိုး အခန်းရှေ့က ဖြတ်သည်။ ဒီကောင်မလေး အခန်းတံခါးလည်း မပိတ်ဘဲ အိပ်နေပါလား။ အခန်းထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ပိုးစိုးပက်စက် အိပ်ပျော်နေသော မိုးကို တွေ့ရသည်။ အိမ်နေရင်း ဂါဝန်အတိုလေးက ပေါင်လည် အထိ လိပ်တက်နေပြီး ပန်တီ အဖြူလေးက ပေါင်ကြားထဲမှာ ကပ်နေသည်။
ဘရာစီယာ အပျော့လေးစည်းနှောင်ထားတဲ့ နို့အစုံက နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက်။ ကိုမောင် တံတွေး မျိုချရပြီ။ ပေါင်ကြားက လီးကြီးကလည်း သွေးတစ်ဒိတ်ဒိတ်တိုးပြီး ကြီးထွားလာပြီး။ ကောင်မလေးမနိုးခင် မြင့်ကို တစ်ချီလောက် လိုးဦးမှပါ။ အိမ်ရှေ့ခန်း ပြန်လာပြီး မီးပူတိုက်နေသော မြင့်ကို နောက်မှ သိုင်းဖက်လိုက်သည်။ ကိုမောင် လက်တွေက မြင့်ရဲ့ ဖြိုးဖြိုးကြွနေတဲ့ နို့အစုံကို အုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ “ကိုမောင် ဘာဖြစ်လာတာလဲ.. ဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေတာကို” ကိုမောင်တစ်ယောက် ဘာမှမပြောဘဲ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ လည်တိုင်ကျော့ကျော့ကို တစ်ရှိုက်မက်မက် နမ်းရင်း မြင့် စိတ်တွေ ထလာအောင် ဆွပေးလိုက်သည်။
“ကဲ အိမ်ရှေ့ကြီးမှာ ခဏနေဦး မီးပူပိတ်လိုက်ဦးမယ်” မြင့်လည်း ကိုမောင်ဘက်ကို ပြန်လှည့်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်လိုက်သည်။ နို့တွေကို နယ်နေသော ကိုမောင့် လက်တစ်ဖက်ကို စောက်ဖုတ်ကြားထဲကို နေရာပြောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ ပုဆိုးကြားက ကိုမောင့်လီးကြီးကို စတင် ကွင်းတိုက်ပေးလိုက်သည်။ လီးက တောင်လာသည်က သံဒုတ်ကြီးပမာ။ နှစ်ယောက်လုံး ထန်လာပြီမို့ အိမ်ရှေ့မှာပင် အလိုးစခန်းဖွင့်တော့မည်။
အိပ်ခန်းထဲက မိုးကို သတိတောင်မထားတော့။ ကိုမောင်က ဘာဂျာစကိုင်သည်။ မြင့်တစ်ယောက် အားအားအီးအီးနဲ့ လူးပျံနေတော့သည်။ ပြီးတော့ ကိုမောင်အလှည့်။ မြင့်ရဲ့ လျှာအစွမ်းကြောင့် ကိုမောင်မှာ စုပ်တသပ်သပ်။ “လိုးရအောင် မြင့်ရယ်” “ကိုမောင့်သဘောလေ.. လိုးမယ်ဆို မြင့်ကတော့ ရယ်ဒီ” “မြင့် မတ်တပ်ရပ်ပြီး ကုန်းပေးပါလား.. ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ကိုမောင် ဒူးပွန်းမှာစိုးလို့” “တကယ်တည်း သူ့အကြိုက်ကြီးပဲ” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ မြင့်တစ်ယောက် ထကုန်းလိုက်ပါတယ်။ ပုဆိုးနဲ့ ထမီကတော့ ကြမ်းပြင်မှာ ပုံလို့။ ကိုမောင်က စွပ်ကျယ်နဲ့။ မြင့်ကတော့ နို့ကြီးတွေ ပေါ်လို့ အကျီင်္ ဖရိုဖရဲ။ ကိုမောင့် လီးကြီးကို မြင့်စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း လိုးသွင်းလိုက်ပါသည်။ မြင့်ကတော့ စအော်ပြီ။ တဖြည်းဖြည်း အရှိန်တက်လာပြီး လိုးသံတွေ ဆူညံလာသည်။
“ဆောင့် ကိုမောင် ဆောင့် မြင့် အရမ်းကောင်းလာပြီ… မြင့် ပြီးတော့မယ်” “ကိုမောင်ကတော့ မပြီးချင်သေးဘူး.. ကြာကြာလေး လိုးချင်တယ်” “ကိုမောင်လိုးချင်သလောက်လိုးလေ မြင့်ခံနိုင်ပါတယ်.. မြင့်ယောကျာ်း ကြာကြာလိုးနိုင်တာ သိသားပဲ… ကိုမောင့်ရဲ့ ကြီးရှည်ကြာလီးကြီးကို မြင့်က စွဲနေတာပါရှင်” အိမ်ရှေ့က လိုးသံတညံညံကြောင့် အခန်းထဲက မိုးတစ်ယောက် နိုးလာပါတယ်။ ဟင်။ ကိုမောင်နဲ့ မမမြင့် ဘာဖြစ်နေတာလဲ မသိဘူး။ ဆူညံနေတာပဲ။ သွားကြည့်ဦးမှ။ မိုး အိမ်ရှေ့ခန်းမရောက်ခင်မှာ ခြေလှမ်းရပ်တန့်သွားပါသည်။ လိုးပွဲကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ကြုံလိုက်ရတာပါ။ မိုးလည်း ရှေ့ဆက်မတိုးဘဲ လိုးပွဲကို စိတ်ဝင်တစား ငေးကြည့်နေပါတယ်။
ကိုမောင့်လီးကြီးက တော်တော်ကြီးတာပဲ။ မြို့လေးမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ မိုး ရည်းစားဟောင်းထက်တောင် ကြီးသေးတယ်။ လိုးနေတာ ဘယ်လောက် ကြာပြီလဲ မသိဘူး။ ထန်နေတာမကျဘဲ အားသွန်ခွန်စိုက် လိုးနိုင်တုန်းပဲ။ မမြင့်ကလည်း ဟော့နေလိုက်တာ ပလူပျံအောင် အလိုးခံနေတာ။ အိုးအိုးအားအား အသံတွေ တအား အော်လို့။ မမမြင့်လည်း လှတာပဲ။ မိန်းမချင်း မနာလိုရအောင် ကိုယ်လုံးက အချိုးအဆက် ကျလှသည်။ ကိုမောင်နဲ့ မမမြင့်ကလည်း အလိုးကောင်းကောင်းလိုး။ မိုးကလည်း ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်။ နောက်ဆုံးမှ ကိုမောင် လီးရည်တွေ ပန်းထုတ်ပြီးမှပဲ အလိုးစခန်းသိမ်းတော့သည်။
ကိုမောင်တစ်ယောက် နောက်ဘက်က အသံကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ မိုးနဲ့ မျက်လုံးချင်း ဆုံမိသည်။ မိုးက သူတို့လိုးပွဲ ကြည့်နေတာကို ရိပ်မိပြီး ကိုမောင်က မျက်စိတစ်ဖက် မှိတ်ပြလိုက်သည်။ မိုးလည်း ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ အခန်းထဲကို ဝင်ပြေးသွားပါတော့တယ်။ ညရောက်တော့ အိမ်မှာ လူစုံပြီ။ မိုး တစ်ယောက် နေ့လည်က လိုးပွဲကို မျက်စိထဲက မထွက်ပေ။ ကိုမောင့်လီးကြီးနဲ့ မမမြင့် စောက်ဖုတ်တို့ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ကို မြင်ယောင်ရင်း စိတ်တွေ ထလာသည်။ ရေချိုးခန်းထဲမှာ စောက်ဖုတ် ပွတ်ပြီး အာသာဖြေလိုက်ဦးမယ်။ ဇာနည်တစ်ယောက် နေ့လည်က ကွင်းတိုက်ထားသော်လည်း မိုး ရေချိုးခန်းဝင်သံကြားတော့ ချောင်းပြန်ရော။ ဒီကောင်မလေး ဘာလုပ်ဦးမလို့လဲ။ ဟင်။ စောက်ဖုတ် ကလိနေတာပဲ။ အခုနေ ဝင်လိုးလို့ရရင် ကောင်းမယ်။ တံခါးဖွင့်ထားလား။ သွားစမ်းကြည့်ဦးမှပဲ။ ဇာနည် ရေချိုးခန်းတံခါးကို အသာလေး တွန်းကြည့်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ တံခါး ပွင့်သွားခဲ့သည်။ မိုး မျက်စိမှိတ်ပြီး စောက်ဖုတ်နှိုက်နေရာသို့ ဇာနည် လီးအတောင်သားနဲ့ ချဉ်းကပ်သွားသည်။ အနီးကပ်ဖက်လိုက်ပြီး မိုး နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ငုံစုပ်လိုက်သည်။ “ဟွန့် ဘယ်သူလဲ.. ကိုဇာနည်ပါလား ဘာလုပ်တာလဲ.. မတော်ပါဘူး” “မိုးရယ် မိုးလည်း လီးလိုအပ်နေတာပဲ… ကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါရစေ” “မဖြစ်ဘူး ထင်တယ် မလုပ်ပါနဲ့” “မတော်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး မိုးရယ်.. မိုးလည်း အတွေ့အကြုံ ရှိတာပဲ… လီးနဲ့ စောက်ဖုတ် မတော်လို့ မလိုးရတာ မရှိပါဘူး” “ဒုက္ခပါပဲ… မိုးတော့ ရှက်လို့ သေမှာပဲ… ကိုဇာနည် ဘယ်သူ့ကိုမှ လျှောက်မပြောရဘူးနော်…. တော်ကြာ မိမိုးတစ်ယောက် ဖင်လျှောက်ဆော့တယ် သတင်းထွက်နေဦးမယ်” “ဘယ်သူ့မှမသိစေရပါဘူး မိုးရယ်… လိုးလိုက်ရအောင်နော်” ဇာနည့်လီးကလည်း ကိုမောင့်လီးထက် မလျော့ပေ။ လီးကြီးနေတော့ မိုး လည်း ကျေနပ်မိသည်။
လီးကြီးကြီးနဲ့ အားရပါးရ အလိုးခံလိုက်ဦးမည်။ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်ပါ။ ဇာနည့်လီးက ငါးမိနစ်လောက် လိုးရုံနဲ့ လီးရည်ထွက်ပြီး ပြီးသွားလေတော့သည်။ လူငယ်တပ်ထွက်မို့ မိုးတစ်ယောက် ငိုမဲ့မဲ့ ဖြစ်သွားသည်။ “ဒီက ကောင်းမလို့ ကြံကာရှိသေး ကိုဇာနည့်လီးက ပျော့သွားပြီလား အဖြစ်လည်းမရှိဘူး” “ဟာ မဟုတ်ပါဘူး မိုးရယ်… မနက်က တစ်ချီကွင်းထုထားလို့ပါ…. ပြီးတာတော့ နည်းနည်းမြန်သွားတယ်…. ခဏလောက် စောင့်ကြည့်ပါလား.. ပြန်တောင်လာမှာပါ” “အမယ်လေး သူ့အလိုးခံရဖို့များ ထိုင်စောင့်ရဦးမတဲ့.. ကဲ ဖယ်ပါ သွားတော့မယ်” မိုး လည်း ကိုယ့်အခန်းကိုယ်ရောက်ပြီး အိပ်ရာပေါ် ထိုင်လိုက်မှ ခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်လာသည်။
မထိတထိ လာလိုးသလို ဖြစ်နေပြီ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိလို့ အဝတ်အားလုံးချွတ်ပြီး ကိုယ်လုံးတီးလေး ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလိုက်သည်။ ကိုမောင်နဲ့ မြင့်ကတော့ သူတို့ အိပ်ခန်းထဲမှာ အလိုးစခန်းထပ်ဖွင့်ရန် အစပျိုးနေပါသည်။ အိပ်ရာပေါ်မှာ ဝတ်လစ်စလစ်ဖြင့် ၆၉ စတိုင် လီးစုပ် စောက်ဖုတ်ရက်နေကြပါသည်။ “ဒေါက်၊ ဒေါက်၊ ” အခန်းတံခါးခေါက်သံ “ဘယ်သူလဲ” “မိုးပါ မမမြင့် တံခါးဖွင့်ပါဦး” “ဟဲ့ ဘာအရေးကြီးလို့လဲ အိပ်ခါနီးကျမှ” “တံခါးပဲ ဖွင့်ပါဦး မိုး အရမ်းလိုအပ်နေလို့ပါ” မမမြင့် တံခါး ထဖွင့်လိုက်တော့ မိုးတစ်ယောက် ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ အခန်းဝမှာ ရပ်နေပါတယ်။
“လာလေ ဝင်ခဲ့ပါ မိုးရေ ဘာဖြစ်လို့လဲ မမမြင့်တို့ကတော့ မြင်တဲ့အတိုင်း အချစ်စခန်းဖွင့်တော့မလို့.. အဝတ်တွေတောင် ချွတ်ပြီးပြီ” “အဲဒါပြောမလို့ မမမြင့်ရေ.. မိုးစိတ်တွေထလာလို့ ကိုဇာနည်နဲ့ လိုးကြတာ… ကိုဇာနည့်လီးက ခဏနဲ့ ပျော့ကျသွားလို့… ကိုမောင်နဲ့ မမမြင့်တော့ ကူညီနိုင်မှာပဲ ဆိုပြီး လာခဲ့တာ” “ဒီလိုလား ရပါတယ်… ကိုမောင်ရေ မိုးကို ပြုစုလိုက်ပါဦး ရှယ်လိုးပေးလိုက်နော်… မြင့်တော့ ဇာနည့်လီးကို သွားကြည့်လိုက်ဦးမယ်… ဒီကောင်လေး မလုပ်တတ်မကိုင်တတ်နဲ့” “လာလေ မိုး ကိုမောင် တာဝန်ယူတယ်… မိုးကို ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြာကြာ လိုးပေးမယ်” မိုးလည်း ကုတင်ပေါ် လှမ်းတက်လိုက်ပါတယ်။ ရှက်ရှက်နဲ့ ခေါင်းကို ငုံ့ထားရင်း လက်တွေကို ပွတ်နေပါတော့တယ်။
မမမြင့် အခန်းတံခါး ပိတ်ပြီး ထွက်သွားတော့ ကိုမောင်က မိုးကို လှမ်းဖက်လိုက်ရင်း “မရှက်ပါနဲ့ မိုးရဲ့.. နှစ်ယောက်အတူ ကုတင်ပေါ်တောင် ရောက်နေပြီပဲဟာကို” မိုးရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေကို စုပ်လိုက်ရင်း နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ကောက်နယ်လိုက်ပါတယ်။ မိုးလည်း ကိုမောင်ကို အလိုက်သင့် ပြန်ဖက်ရင်း အနမ်းပြင်းပြင်းရှရှကို ခံစားလိုက်ပါတယ်။ နို့နယ်ပြီး နမ်းလို့ ဝတော့ ကိုမောင်က မိုးစောက်ဖုတ်ကို တိုက်စစ်ဆင်လာပါတယ်။
ဘာဂျာ ဆွဲပြီပေါ့။ မိုးမှာ နေ့လည်က မမမြင့် ဖြစ်သလို လူးပျံနေပါတော့တယ်။ စောက်ဖုတ်ရက်လို့ အားရတော့ ကိုမောင်က မိုးကို လိုးတော့မယ်ပေါ့။ ကိုမောင်တို့ လူနံပိန် ကျွဲချိုလိမ် ဆိုတဲ့အတိုင်း လီးကြီးကြီး ရှည်ရှည် ကြာကြာ လိုးပေတော့။ မိုးကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ အချီချီပြီးအောင် လိုးစွမ်းပြပါတော့တယ်။ မိုးတော့ ကိုမောင့်ကို စွဲသွားပြီ။ မမမြင့်နဲ့ နှစ်ယောက် အတူအလိုးခံဖို့တောင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။
” ဒေါက် ဒေါက် ဘယ်သူလဲ” “မမမြင့်ပါ မောင်လေးဇာနည်ရဲ့ တံခါးဖွင့်ပါဦး” ဇာနည် တံခါးဖွင့်လိုက်တော့ မမမြင့်က ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ ပုလင်းလေးတစ်လုံး ကိုင်ကာ ရပ်နေပါတယ်။ “ဟာ မမမြင့် … ဘာလုပ်မလို့လဲ ကိုမောင်ရော” “အမယ်လေး လူကိုမြင်တာ သရဲတွေ့တာ ကျနေတာပဲ… အလန့်တကြားနဲ့.. ကိုမောင် ရှိပါတယ်.. မိုးကို အခန်းထဲမှာ လိုးနေတယ်.. ဇာနည်နဲ့ မိုးနဲ့ ခဏ လိုးကြသေးတယ်ဆို” “ဟုတ်တယ် မမမြင့်ရယ်… ကျနော်က တပ်ထွက်မို့ မိုး စိတ်ညစ်ပြီး ပြန်သွားတယ်.. အခု ကိုမောင်က မိုးကို လိုးပေးနေတာလား အားကျလိုက်တာ” “အဲဒါကြောင့် မမမြင့်က ဇာနည့်ဆီ လာခဲ့တာ… ကိုမောင် မှီဝဲနေကြ ကြီးရှည်ကြာဆေး ရှိတယ်ကွဲ့…. မမမြင့် ယူလာတယ်…. မောင်လေးကို သင်ပေးစရာတွေ ရှိတယ်… အဝတ်တွေ အကုန် ချွတ်လိုက်ပါ” မမမြင့်လည်း အခန်းထဲ ဝင်ပြီး ဇာနည့်လီးကို ကြည့်လိုက်ပါသည်။
“မောင်လေးလည်း ဆိုဒ်ကြီးပဲ.. ကိုမောင့်ထက်တော့ မလျော့ဘူး ရော့ ဒီဆေးလေးသောက်လိုက်” ဇာနည်လည်း ထွေထွေထူးထူး ပြောမနေတော့ဘဲ မော့သောက်ချလိုက်ပါသည်။ ရှိန်းကနဲ ဖြစ်ပြီး ဆေးစွမ်းက ပြလေပြီ။ မမမြင့်ကလည်း လီးကို လာဆွနေပါသည်။ “မမမြင့် လီးစုပ်ပေးပါလား” “လာပါပြီတော် မမမြင့် လီးစုပ်ကျွမ်းကြောင်း ပြရသေးတာပေါ့” မမမြင့် လျှာဖျားမှ ဇာနည်တို့ အလူးအလဲပင်။ အကောင်းကြီးကြီး ကောင်းနေပါတော့သည်။ ဆေးသောက်ထားတော့ တော်တော်နဲ့ မပြီးပါ။ “လိုးကြမယ်လေ မမမြင့်” “မင်းသဘောချည်းပဲ.. လိုးတော်မူ.. လိုးတော်မူ” ဇာနည် လူပျိုအားကောင်းမောင်းသန် နွားသိုးကြိုးပြတ် ကြုံးလိုးပါတော့တယ်။ မမမြင့်တော့ အချီချီ ပြီးရပြီပေါ့။ အနေအထားမျိုးစုံကို သင်ပြပေးရင်း ကောင်းကောင်းကြီး အလိုးခံနေပါတော့တယ်။
စိတ်ထဲကတော့ ကိုမောင်နဲ့ ဇာနည် တစ်လှည့်စီ အလိုးခံမယ်ပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ကိုမောင်နဲ့ မိုး။ ဇာနည်နဲ့ မမမြင့်။ ဝက်ဝက်ကွဲ လိုးကြ ဆော်ကြရင်း မိုးလင်းခါနီးမှ အလိုးစခန်းသိမ်းပြီး အိပ်ပျော်သွားပါသည်။ မနက် မိုးလင်းတော့ ကိုမောင်ကော ဇာနည်ကော အကြံတူပြန်ပါပြီ။ လင်းဆွဲလေး လိုးကြဖို့။ ဒီမှာတော့ မိုးနဲ့ မြင့်က ရေချိုးရင်း လိုးကြရအောင် အကြံပြုပါသည်။ ရေချိုးရင်းလိုးကြတာ အအေးမိမှာစိုး၍ ရပ်လိုက်ရသည်။ မနက်စာစားတော့ အားလုံး ပြုံးစိစိနဲ့။ မမမြင့်က အဆိုတင်သွင်းပါသည်။
လေးယောက်ပေါင်း လိုးကြရန်။ ဖိုးဆမ်းပေါ့။ မိုးနဲ့ ဇာနည်နဲ့ ကိုမောင်ကလည်း အကြွင်းမရှိ ထောက်ခံ၏။ အတွေ့အကြုံအသစ်တစ်မျိုးပေါ့။ ထိုနေ့မှစ၍ ပတ်လည်ကြုံးစနစ် ပေါ် ပေါက်လာပါသည်။ ကိုမောင်နဲ့ မမမြင့် လိုးတဲ့အခါလိုးတယ်။ ဇာနည်နဲ့ မိုး လိုးတဲ့အခါလိုးတယ်။ ကိုမောင်နဲ့ မိုး လိုးတဲ့အခါ လိုးတယ်။ ဇာနည်နဲ့ မမမြင့် လိုးတဲ့အခါလိုးတယ်။ လေးယောက်ဆုံပြီး လိုးတဲ့အခါလိုးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ အလိုးခရီး ဆက်ကြလေသတည်း။ ပြီးပါပြီ
အိမျ တံခါးခေါငျးလောငျးကို ကောငျမလေးတဈယောကျ ဖွညျးညငျးစှာ နှိပျလိုကျပါသညျ။ တံခါးဖှငျ့သံနဲ့ အတူ ”ဟယျ မိုး ပါလား.. ရောကျလာပွီလား.. လာ လာ ဝငျခဲ့လေ” “ဟုတျကဲ့ မမမွငျ့.. ဘူတာရုံကနေ တနျးလာခဲ့တာ ကိုမောငျကော” ”ရှိတယျ ရှိတယျ ဇာနညျလညျး ရှိတယျ” ”ကိုမောငျရေ ဇာနညျရေ ဒီမှာ မိုး ရောကျလာပွီ” အိမျရှေ့ဧညျ့ခနျးသို့ ကိုမောငျနှငျ့ ဇာနညျ ရောကျလာပါသညျ။ အလနျးလေးပါလား။ ဇာနညျတဈယောကျ စိတျထဲက စဉျးစားလိုကျပါသညျ။
ဟုတျပါသညျ။ မိုးက မိနျးမခြောလေးတဈယောကျပါ။ ကဈြကဈြလဈလဈနှငျ့ အရပျရှညျ ပိနျသှယျသူလေးပါ။ တငျတှေ ရငျတှကေလညျး မကွီးလှနျး၊ မသေးလှနျး။ အနတေျော။ ကွညျ့ကောငျးတဲ့ ဆိုဒျကလေးပါ။ တက်ကသိုလျ ပထမနှဈ တကျမယျ့ ကြောငျးသူလေးမို့ တကျကွှလနျးဆနျးတဲ့ ပနျးကလေးနှယျ။ ဇာနညျကလညျး တက်ကသိုလျကြောငျးသား။ တတိယနှဈ။ အသကျအရှယျခငျြးကလညျး သိပျမကှာပါ။ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျတော့ ကှာခွားသညျ။
ဇာနညျက ဂငျြမျ မှနျမှနျသှားပွီး အားကစားလိုကျစားသူမို့ ဘျောဒီတောငျ့သညျ။ ကိုမောငျနဲ့ မမမွငျ့တို့ စုံတှဲကတော့ တဈမြိုး။ ကိုမောငျက ပိနျပိနျပါးပါး။ မမမွငျ့က ရငျရငျလှ တငျတငျလှ။ ဆကျဆီကပြွီး ပူပူလောငျလောငျလှသူ။ စမျးခြောငျးထဲက ရပျကှကျတဈခုမှာ မိဘဘကျမှ အမှရေသော အိမျလေးတဈလုံးမှာ နကွေသညျ။ အိမျမှာ အခနျးပိုတှရှေိနလေို့ ဇာနညျနှငျ့ မိုး ကို ငှါးထားခွငျးပါ။ ညားခါစ လငျမယားမို့ ခဈြဖြားတှတေကျနကွေသညျ။
စိတျလာရငျ တှမေ့ရှောငျ လိုးတတျကွပါတယျ။ “မိုးနဲ့ ဇာနညျကို မိတျဆကျပေးရဦးမယျ.. အိမျမှာ တူတူနကွေမယျ့ လူတှဆေိုတော့ ခဈြခဈြခငျခငျပေါ့” “ဟာ မမမွငျ့ကွီးကလညျး နောကျနပွေနျပွီ” “မိုးရော ဇာနညျပါ ရှကျကိုးရှကျကနျးနဲ့.. မိုးကလညျး ဇာနညျကို မဆိုးဘူး စိတျကူးယဉျစရာပေါ့” “ကဲ မိုး လညျး နားလိုကျပါဦး… နောကျမှ စကားပွောကွတာပေါ့” ဒီလိုနဲ့ တဈပတျလောကျနတေော့ ကြောငျးတှေ ဖှငျ့ပွီမို့ မိုးနှငျ့ ဇာနညျတို့ အလုပျရှုပျကွပွီ။ ကြောငျးသှားကြောငျးပွနျ ခဏ ဆုံကွသညျ။ မမမွငျ့တို့ကတော့ ပုံမှနျ ကွားရကျမြားကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖွတျသနျးကွသညျ။
“ကိုဇာနညျ မနကျဆိုရငျ ထပွေးတာလား.. လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာလား” “ဟုတျတယျ မိုးရဲ့.. ဘာဖွဈလို့လဲ” “မိုးလညျး လိုကျပွေးခငျြလို့” “ရပါတယျ မနကျဖွနျ ပွေးကွတာပေါ့” စနနေေ့ မနကျ အားကစားဝတျစုံ ကှကျတိ အသားကပျလေးနဲ့ မိုး က လှခငျြတိုငျး လှနပေါတော့တယျ။ ဇာနညျလညျး ဘောငျးဘီ ပှပှဝတျထားလို့ တျောသေးသညျ။ ခကျြခငျြး လီးတောငျလာလို့။ ပွေးကွတော့လညျး ဇာနညျက မကွာမကွာ နောကျခနျြနခေဲ့သညျ။ မိုး ရဲ့ နောကျပိုငျးအလှကို တဈဝကွီး ရှူစားပဈလိုကျသညျ။
အိမျရောကျမှ တှကွေ့တာပေါ့။ ဇာနညျက အကွံသမား။ မိုးနဲ့ ဇာနညျ အတူတူ ရှယျသုံးရသညျ့ ရခြေိုးခနျးနံရံမှာ အပေါကျဖောကျထားသညျ။ အလညျက ရခြေိုးခနျးကို ဟိုဘကျခနျး ဒီဘကျခနျးနကွေတော့ ဇာနညျဘကျက နံရံကို အပေါကျဖောကျလိုကျရငျ မွငျကှငျးက ရှငျးရှငျးလငျးလငျး။ မိုး ရခြေိုးခနျးဝငျတဲ့ အခြိနျ ခြောငျးကွညျ့နကြေ။ မိုး ရခြေိုးတဲ့ ကိုယျလုံးတီးလေးကော၊ တဈကိုယျရေ အာသာဖွတေတျတာကော။ ဇာနညျတို့ အလှတျရနပွေီ။ ခြောငျးကွညျ့ရငျး ကှငျးပေါငျးလညျး မနညျးအောငျ တိုကျပွီးပွီ။ မိုး ရဲ့ နို့တှကေ လုံးဝနျးမို့မောကျနသေညျ။
ကိုယျလုံးပိနျသှယျသျောလညျး ဘျောဒီနဲ့ စာရငျ နို့ကွီးတယျ။ စောကျဖုတျကလညျး ဖောငျးဖောငျးကွီးနဲ့ ခနျ့ထညျသညျ။ စောကျမှေးအမွဲရိတျသူမို့ ပွောငျရှငျးတဲ့ ကတုံးလေးပါ။ ရခြေိုးပွီးရငျ စောကျဖုတျကိုလညျး နှိုကျကစားတတျသညျ။ စောကျစိကို ပှတျရငျး အာသာဖွတေတျသညျ။ အိမျပွနျရောကျတော့ လုပျစရာရှိတာလုပျကွသညျ။ မိုး ရခြေိုး၍ ဇာနညျခြောငျးကွညျ့သညျ။ ကှငျးတိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ဇာနညျလညျး ရခြေိုးပွီး အပွငျထှကျသှားသညျ။
မိုး ကတော့ မမမွငျ့နှငျ့ ကိုမောငျတို့နဲ့ နလေ့ညျစာ ထမငျးစားဖွဈသညျ။ “မနကျက ထပွေးတာ ပငျပနျးသှားပွီ.. မမမွငျ့ရေ မိုး တဈရေးလောကျ အိပျလိုကျဦးမယျ” “အေး အေး မမမွငျ့လညျး မီးပူတိုကျလိုကျဦးမယျ” ကိုမောငျကတော့ မမမွငျ့ မီးပူတိုကျနသေော အိမျရှခေ့နျးမှာ ဂြာနယျ ဖတျနသေညျ။ နာရီဝကျလောကျကွာတော့ ရငေတျလာသညျ။ ကိုမောငျ နောကျဖေးဝငျ၍ ရဝေငျသောကျတော့ မိုး အခနျးရှကေ့ ဖွတျသညျ။ ဒီကောငျမလေး အခနျးတံခါးလညျး မပိတျဘဲ အိပျနပေါလား။ အခနျးထဲကို လှမျးကွညျ့လိုကျတော့ ပိုးစိုးပကျစကျ အိပျပြျောနသေော မိုးကို တှရေ့သညျ။ အိမျနရေငျး ဂါဝနျအတိုလေးက ပေါငျလညျ အထိ လိပျတကျနပွေီး ပနျတီ အဖွူလေးက ပေါငျကွားထဲမှာ ကပျနသေညျ။
ဘရာစီယာ အပြော့လေးစညျးနှောငျထားတဲ့ နို့အစုံက နိမျ့လိုကျ မွငျ့လိုကျ။ ကိုမောငျ တံတှေး မြိုခရြပွီ။ ပေါငျကွားက လီးကွီးကလညျး သှေးတဈဒိတျဒိတျတိုးပွီး ကွီးထှားလာပွီး။ ကောငျမလေးမနိုးခငျ မွငျ့ကို တဈခြီလောကျ လိုးဦးမှပါ။ အိမျရှခေ့နျး ပွနျလာပွီး မီးပူတိုကျနသေော မွငျ့ကို နောကျမှ သိုငျးဖကျလိုကျသညျ။ ကိုမောငျ လကျတှကေ မွငျ့ရဲ့ ဖွိုးဖွိုးကွှနတေဲ့ နို့အစုံကို အုပျကိုငျလိုကျသညျ။ “ကိုမောငျ ဘာဖွဈလာတာလဲ.. ဒီမှာ အလုပျလုပျနတောကို” ကိုမောငျတဈယောကျ ဘာမှမပွောဘဲ လုပျစရာရှိတာ ဆကျလုပျလိုကျပါတယျ။ လညျတိုငျကြော့ကြော့ကို တဈရှိုကျမကျမကျ နမျးရငျး မွငျ့ စိတျတှေ ထလာအောငျ ဆှပေးလိုကျသညျ။
“ကဲ အိမျရှကွေီ့းမှာ ခဏနဦေး မီးပူပိတျလိုကျဦးမယျ” မွငျ့လညျး ကိုမောငျဘကျကို ပွနျလှညျ့ပွီး နှုတျခမျးခငျြး စုပျလိုကျသညျ။ နို့တှကေို နယျနသေော ကိုမောငျ့ လကျတဈဖကျကို စောကျဖုတျကွားထဲကို နရောပွောငျးပေးလိုကျပါသညျ။ ပုဆိုးကွားက ကိုမောငျ့လီးကွီးကို စတငျ ကှငျးတိုကျပေးလိုကျသညျ။ လီးက တောငျလာသညျက သံဒုတျကွီးပမာ။ နှဈယောကျလုံး ထနျလာပွီမို့ အိမျရှမှေ့ာပငျ အလိုးစခနျးဖှငျ့တော့မညျ။
အိပျခနျးထဲက မိုးကို သတိတောငျမထားတော့။ ကိုမောငျက ဘာဂြာစကိုငျသညျ။ မွငျ့တဈယောကျ အားအားအီးအီးနဲ့ လူးပြံနတေော့သညျ။ ပွီးတော့ ကိုမောငျအလှညျ့။ မွငျ့ရဲ့ လြှာအစှမျးကွောငျ့ ကိုမောငျမှာ စုပျတသပျသပျ။ “လိုးရအောငျ မွငျ့ရယျ” “ကိုမောငျ့သဘောလေ.. လိုးမယျဆို မွငျ့ကတော့ ရယျဒီ” “မွငျ့ မတျတပျရပျပွီး ကုနျးပေးပါလား.. ကွမျးပွငျပျေါမှာ ကိုမောငျ ဒူးပှနျးမှာစိုးလို့” “တကယျတညျး သူ့အကွိုကျကွီးပဲ” ပွောပွောဆိုဆိုနဲ့ မွငျ့တဈယောကျ ထကုနျးလိုကျပါတယျ။ ပုဆိုးနဲ့ ထမီကတော့ ကွမျးပွငျမှာ ပုံလို့။ ကိုမောငျက စှပျကယျြနဲ့။ မွငျ့ကတော့ နို့ကွီးတှေ ပျေါလို့ အကြီင်ျ ဖရိုဖရဲ။ ကိုမောငျ့ လီးကွီးကို မွငျ့စောကျဖုတျထဲသို့ ဖွညျးဖွညျးခငျြး လိုးသှငျးလိုကျပါသညျ။ မွငျ့ကတော့ စအျောပွီ။ တဖွညျးဖွညျး အရှိနျတကျလာပွီး လိုးသံတှေ ဆူညံလာသညျ။
“ဆောငျ့ ကိုမောငျ ဆောငျ့ မွငျ့ အရမျးကောငျးလာပွီ… မွငျ့ ပွီးတော့မယျ” “ကိုမောငျကတော့ မပွီးခငျြသေးဘူး.. ကွာကွာလေး လိုးခငျြတယျ” “ကိုမောငျလိုးခငျြသလောကျလိုးလေ မွငျ့ခံနိုငျပါတယျ.. မွငျ့ယောကျြား ကွာကွာလိုးနိုငျတာ သိသားပဲ… ကိုမောငျ့ရဲ့ ကွီးရှညျကွာလီးကွီးကို မွငျ့က စှဲနတောပါရှငျ” အိမျရှကေ့ လိုးသံတညံညံကွောငျ့ အခနျးထဲက မိုးတဈယောကျ နိုးလာပါတယျ။ ဟငျ။ ကိုမောငျနဲ့ မမမွငျ့ ဘာဖွဈနတောလဲ မသိဘူး။ ဆူညံနတောပဲ။ သှားကွညျ့ဦးမှ။ မိုး အိမျရှခေ့နျးမရောကျခငျမှာ ခွလှေမျးရပျတနျ့သှားပါသညျ။ လိုးပှဲကို မကျြဝါးထငျထငျ တှကွေုံ့လိုကျရတာပါ။ မိုးလညျး ရှဆေ့ကျမတိုးဘဲ လိုးပှဲကို စိတျဝငျတစား ငေးကွညျ့နပေါတယျ။
ကိုမောငျ့လီးကွီးက တျောတျောကွီးတာပဲ။ မွို့လေးမှာ ကနျြခဲ့တဲ့ မိုး ရညျးစားဟောငျးထကျတောငျ ကွီးသေးတယျ။ လိုးနတော ဘယျလောကျ ကွာပွီလဲ မသိဘူး။ ထနျနတောမကဘြဲ အားသှနျခှနျစိုကျ လိုးနိုငျတုနျးပဲ။ မမွငျ့ကလညျး ဟော့နလေိုကျတာ ပလူပြံအောငျ အလိုးခံနတော။ အိုးအိုးအားအား အသံတှေ တအား အျောလို့။ မမမွငျ့လညျး လှတာပဲ။ မိနျးမခငျြး မနာလိုရအောငျ ကိုယျလုံးက အခြိုးအဆကျ ကလြှသညျ။ ကိုမောငျနဲ့ မမမွငျ့ကလညျး အလိုးကောငျးကောငျးလိုး။ မိုးကလညျး ကွညျ့ကောငျးကောငျးနဲ့ကွညျ့။ နောကျဆုံးမှ ကိုမောငျ လီးရညျတှေ ပနျးထုတျပွီးမှပဲ အလိုးစခနျးသိမျးတော့သညျ။
ကိုမောငျတဈယောကျ နောကျဘကျက အသံကွားလို့ လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ မိုးနဲ့ မကျြလုံးခငျြး ဆုံမိသညျ။ မိုးက သူတို့လိုးပှဲ ကွညျ့နတောကို ရိပျမိပွီး ကိုမောငျက မကျြစိတဈဖကျ မှိတျပွလိုကျသညျ။ မိုးလညျး ရှကျကိုးရှကျကနျးနဲ့ အခနျးထဲကို ဝငျပွေးသှားပါတော့တယျ။ ညရောကျတော့ အိမျမှာ လူစုံပွီ။ မိုး တဈယောကျ နလေ့ညျက လိုးပှဲကို မကျြစိထဲက မထှကျပေ။ ကိုမောငျ့လီးကွီးနဲ့ မမမွငျ့ စောကျဖုတျတို့ ဝငျလိုကျထှကျလိုကျကို မွငျယောငျရငျး စိတျတှေ ထလာသညျ။ ရခြေိုးခနျးထဲမှာ စောကျဖုတျ ပှတျပွီး အာသာဖွလေိုကျဦးမယျ။ ဇာနညျတဈယောကျ နလေ့ညျက ကှငျးတိုကျထားသျောလညျး မိုး ရခြေိုးခနျးဝငျသံကွားတော့ ခြောငျးပွနျရော။ ဒီကောငျမလေး ဘာလုပျဦးမလို့လဲ။ ဟငျ။ စောကျဖုတျ ကလိနတောပဲ။ အခုနေ ဝငျလိုးလို့ရရငျ ကောငျးမယျ။ တံခါးဖှငျ့ထားလား။ သှားစမျးကွညျ့ဦးမှပဲ။ ဇာနညျ ရခြေိုးခနျးတံခါးကို အသာလေး တှနျးကွညျ့သညျ။
ကံကောငျးထောကျမစှာ တံခါး ပှငျ့သှားခဲ့သညျ။ မိုး မကျြစိမှိတျပွီး စောကျဖုတျနှိုကျနရောသို့ ဇာနညျ လီးအတောငျသားနဲ့ ခဉျြးကပျသှားသညျ။ အနီးကပျဖကျလိုကျပွီး မိုး နှုတျခမျးပါးလေးကို ငုံစုပျလိုကျသညျ။ “ဟှနျ့ ဘယျသူလဲ.. ကိုဇာနညျပါလား ဘာလုပျတာလဲ.. မတျောပါဘူး” “မိုးရယျ မိုးလညျး လီးလိုအပျနတောပဲ… ကို ဖွညျ့ဆညျးပေးပါရစေ” “မဖွဈဘူး ထငျတယျ မလုပျပါနဲ့” “မတျောဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး မိုးရယျ.. မိုးလညျး အတှအေ့ကွုံ ရှိတာပဲ… လီးနဲ့ စောကျဖုတျ မတျောလို့ မလိုးရတာ မရှိပါဘူး” “ဒုက်ခပါပဲ… မိုးတော့ ရှကျလို့ သမှောပဲ… ကိုဇာနညျ ဘယျသူ့ကိုမှ လြှောကျမပွောရဘူးနျော…. တျောကွာ မိမိုးတဈယောကျ ဖငျလြှောကျဆော့တယျ သတငျးထှကျနဦေးမယျ” “ဘယျသူ့မှမသိစရေပါဘူး မိုးရယျ… လိုးလိုကျရအောငျနျော” ဇာနညျ့လီးကလညျး ကိုမောငျ့လီးထကျ မလြော့ပေ။ လီးကွီးနတေော့ မိုး လညျး ကနြေပျမိသညျ။
လီးကွီးကွီးနဲ့ အားရပါးရ အလိုးခံလိုကျဦးမညျ။ မှနျးခကျြနဲ့ နှမျးထှကျမကိုကျပါ။ ဇာနညျ့လီးက ငါးမိနဈလောကျ လိုးရုံနဲ့ လီးရညျထှကျပွီး ပွီးသှားလတေော့သညျ။ လူငယျတပျထှကျမို့ မိုးတဈယောကျ ငိုမဲ့မဲ့ ဖွဈသှားသညျ။ “ဒီက ကောငျးမလို့ ကွံကာရှိသေး ကိုဇာနညျ့လီးက ပြော့သှားပွီလား အဖွဈလညျးမရှိဘူး” “ဟာ မဟုတျပါဘူး မိုးရယျ… မနကျက တဈခြီကှငျးထုထားလို့ပါ…. ပွီးတာတော့ နညျးနညျးမွနျသှားတယျ…. ခဏလောကျ စောငျ့ကွညျ့ပါလား.. ပွနျတောငျလာမှာပါ” “အမယျလေး သူ့အလိုးခံရဖို့မြား ထိုငျစောငျ့ရဦးမတဲ့.. ကဲ ဖယျပါ သှားတော့မယျ” မိုး လညျး ကိုယျ့အခနျးကိုယျရောကျပွီး အိပျရာပျေါ ထိုငျလိုကျမှ ခံခငျြစိတျတှေ တဖှားဖှား ပျေါလာသညျ။
မထိတထိ လာလိုးသလို ဖွဈနပွေီ။ ဘယျလိုလုပျရမှနျး မသိလို့ အဝတျအားလုံးခြှတျပွီး ကိုယျလုံးတီးလေး ငုတျတုတျထိုငျနလေိုကျသညျ။ ကိုမောငျနဲ့ မွငျ့ကတော့ သူတို့ အိပျခနျးထဲမှာ အလိုးစခနျးထပျဖှငျ့ရနျ အစပြိုးနပေါသညျ။ အိပျရာပျေါမှာ ဝတျလဈစလဈဖွငျ့ ၆၉ စတိုငျ လီးစုပျ စောကျဖုတျရကျနကွေပါသညျ။ “ဒေါကျ၊ ဒေါကျ၊ ” အခနျးတံခါးခေါကျသံ “ဘယျသူလဲ” “မိုးပါ မမမွငျ့ တံခါးဖှငျ့ပါဦး” “ဟဲ့ ဘာအရေးကွီးလို့လဲ အိပျခါနီးကမြှ” “တံခါးပဲ ဖှငျ့ပါဦး မိုး အရမျးလိုအပျနလေို့ပါ” မမမွငျ့ တံခါး ထဖှငျ့လိုကျတော့ မိုးတဈယောကျ ကိုယျလုံးတီးနဲ့ အခနျးဝမှာ ရပျနပေါတယျ။
“လာလေ ဝငျခဲ့ပါ မိုးရေ ဘာဖွဈလို့လဲ မမမွငျ့တို့ကတော့ မွငျတဲ့အတိုငျး အခဈြစခနျးဖှငျ့တော့မလို့.. အဝတျတှတေောငျ ခြှတျပွီးပွီ” “အဲဒါပွောမလို့ မမမွငျ့ရေ.. မိုးစိတျတှထေလာလို့ ကိုဇာနညျနဲ့ လိုးကွတာ… ကိုဇာနညျ့လီးက ခဏနဲ့ ပြော့ကသြှားလို့… ကိုမောငျနဲ့ မမမွငျ့တော့ ကူညီနိုငျမှာပဲ ဆိုပွီး လာခဲ့တာ” “ဒီလိုလား ရပါတယျ… ကိုမောငျရေ မိုးကို ပွုစုလိုကျပါဦး ရှယျလိုးပေးလိုကျနျော… မွငျ့တော့ ဇာနညျ့လီးကို သှားကွညျ့လိုကျဦးမယျ… ဒီကောငျလေး မလုပျတတျမကိုငျတတျနဲ့” “လာလေ မိုး ကိုမောငျ တာဝနျယူတယျ… မိုးကို ကောငျးကောငျးနဲ့ ကွာကွာ လိုးပေးမယျ” မိုးလညျး ကုတငျပျေါ လှမျးတကျလိုကျပါတယျ။ ရှကျရှကျနဲ့ ခေါငျးကို ငုံ့ထားရငျး လကျတှကေို ပှတျနပေါတော့တယျ။
မမမွငျ့ အခနျးတံခါး ပိတျပွီး ထှကျသှားတော့ ကိုမောငျက မိုးကို လှမျးဖကျလိုကျရငျး “မရှကျပါနဲ့ မိုးရဲ့.. နှဈယောကျအတူ ကုတငျပျေါတောငျ ရောကျနပွေီပဲဟာကို” မိုးရဲ့ နှုတျခမျးပါးလေးတှကေို စုပျလိုကျရငျး နို့ကွီးနှဈလုံးကို ကောကျနယျလိုကျပါတယျ။ မိုးလညျး ကိုမောငျကို အလိုကျသငျ့ ပွနျဖကျရငျး အနမျးပွငျးပွငျးရှရှကို ခံစားလိုကျပါတယျ။ နို့နယျပွီး နမျးလို့ ဝတော့ ကိုမောငျက မိုးစောကျဖုတျကို တိုကျစဈဆငျလာပါတယျ။
ဘာဂြာ ဆှဲပွီပေါ့။ မိုးမှာ နလေ့ညျက မမမွငျ့ ဖွဈသလို လူးပြံနပေါတော့တယျ။ စောကျဖုတျရကျလို့ အားရတော့ ကိုမောငျက မိုးကို လိုးတော့မယျပေါ့။ ကိုမောငျတို့ လူနံပိနျ ကြှဲခြိုလိမျ ဆိုတဲ့အတိုငျး လီးကွီးကွီး ရှညျရှညျ ကွာကွာ လိုးပတေော့။ မိုးကို ပုံစံမြိုးစုံနဲ့ အခြီခြီပွီးအောငျ လိုးစှမျးပွပါတော့တယျ။ မိုးတော့ ကိုမောငျ့ကို စှဲသှားပွီ။ မမမွငျ့နဲ့ နှဈယောကျ အတူအလိုးခံဖို့တောငျ ဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျပါတယျ။
” ဒေါကျ ဒေါကျ ဘယျသူလဲ” “မမမွငျ့ပါ မောငျလေးဇာနညျရဲ့ တံခါးဖှငျ့ပါဦး” ဇာနညျ တံခါးဖှငျ့လိုကျတော့ မမမွငျ့က ကိုယျလုံးတီးနဲ့ ပုလငျးလေးတဈလုံး ကိုငျကာ ရပျနပေါတယျ။ “ဟာ မမမွငျ့ … ဘာလုပျမလို့လဲ ကိုမောငျရော” “အမယျလေး လူကိုမွငျတာ သရဲတှတေ့ာ ကနြတောပဲ… အလနျ့တကွားနဲ့.. ကိုမောငျ ရှိပါတယျ.. မိုးကို အခနျးထဲမှာ လိုးနတေယျ.. ဇာနညျနဲ့ မိုးနဲ့ ခဏ လိုးကွသေးတယျဆို” “ဟုတျတယျ မမမွငျ့ရယျ… ကနြျောက တပျထှကျမို့ မိုး စိတျညဈပွီး ပွနျသှားတယျ.. အခု ကိုမောငျက မိုးကို လိုးပေးနတောလား အားကလြိုကျတာ” “အဲဒါကွောငျ့ မမမွငျ့က ဇာနညျ့ဆီ လာခဲ့တာ… ကိုမောငျ မှီဝဲနကွေ ကွီးရှညျကွာဆေး ရှိတယျကှဲ့…. မမမွငျ့ ယူလာတယျ…. မောငျလေးကို သငျပေးစရာတှေ ရှိတယျ… အဝတျတှေ အကုနျ ခြှတျလိုကျပါ” မမမွငျ့လညျး အခနျးထဲ ဝငျပွီး ဇာနညျ့လီးကို ကွညျ့လိုကျပါသညျ။
“မောငျလေးလညျး ဆိုဒျကွီးပဲ.. ကိုမောငျ့ထကျတော့ မလြော့ဘူး ရော့ ဒီဆေးလေးသောကျလိုကျ” ဇာနညျလညျး ထှထှေထေူးထူး ပွောမနတေော့ဘဲ မော့သောကျခလြိုကျပါသညျ။ ရှိနျးကနဲ ဖွဈပွီး ဆေးစှမျးက ပွလပွေီ။ မမမွငျ့ကလညျး လီးကို လာဆှနပေါသညျ။ “မမမွငျ့ လီးစုပျပေးပါလား” “လာပါပွီတျော မမမွငျ့ လီးစုပျကြှမျးကွောငျး ပွရသေးတာပေါ့” မမမွငျ့ လြှာဖြားမှ ဇာနညျတို့ အလူးအလဲပငျ။ အကောငျးကွီးကွီး ကောငျးနပေါတော့သညျ။ ဆေးသောကျထားတော့ တျောတျောနဲ့ မပွီးပါ။ “လိုးကွမယျလေ မမမွငျ့” “မငျးသဘောခညျြးပဲ.. လိုးတျောမူ.. လိုးတျောမူ” ဇာနညျ လူပြိုအားကောငျးမောငျးသနျ နှားသိုးကွိုးပွတျ ကွုံးလိုးပါတော့တယျ။ မမမွငျ့တော့ အခြီခြီ ပွီးရပွီပေါ့။ အနအေထားမြိုးစုံကို သငျပွပေးရငျး ကောငျးကောငျးကွီး အလိုးခံနပေါတော့တယျ။
စိတျထဲကတော့ ကိုမောငျနဲ့ ဇာနညျ တဈလှညျ့စီ အလိုးခံမယျပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ကိုမောငျနဲ့ မိုး။ ဇာနညျနဲ့ မမမွငျ့။ ဝကျဝကျကှဲ လိုးကွ ဆျောကွရငျး မိုးလငျးခါနီးမှ အလိုးစခနျးသိမျးပွီး အိပျပြျောသှားပါသညျ။ မနကျ မိုးလငျးတော့ ကိုမောငျကော ဇာနညျကော အကွံတူပွနျပါပွီ။ လငျးဆှဲလေး လိုးကွဖို့။ ဒီမှာတော့ မိုးနဲ့ မွငျ့က ရခြေိုးရငျး လိုးကွရအောငျ အကွံပွုပါသညျ။ ရခြေိုးရငျးလိုးကွတာ အအေးမိမှာစိုး၍ ရပျလိုကျရသညျ။ မနကျစာစားတော့ အားလုံး ပွုံးစိစိနဲ့။ မမမွငျ့က အဆိုတငျသှငျးပါသညျ။
လေးယောကျပေါငျး လိုးကွရနျ။ ဖိုးဆမျးပေါ့။ မိုးနဲ့ ဇာနညျနဲ့ ကိုမောငျကလညျး အကွှငျးမရှိ ထောကျခံ၏။ အတှအေ့ကွုံအသဈတဈမြိုးပေါ့။ ထိုနမှေ့စ၍ ပတျလညျကွုံးစနဈ ပျေါ ပေါကျလာပါသညျ။ ကိုမောငျနဲ့ မမမွငျ့ လိုးတဲ့အခါလိုးတယျ။ ဇာနညျနဲ့ မိုး လိုးတဲ့အခါလိုးတယျ။ ကိုမောငျနဲ့ မိုး လိုးတဲ့အခါ လိုးတယျ။ ဇာနညျနဲ့ မမမွငျ့ လိုးတဲ့အခါလိုးတယျ။ လေးယောကျဆုံပွီး လိုးတဲ့အခါလိုးတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ပြျောရှငျစှာ အလိုးခရီး ဆကျကွလသေတညျး။ ပွီးပါပွီ
ကျနော့် ရဲ့ ပျား ဘုရင်မလေး